Solution kune isingazivikanwe dambudziko rekupenya iyo isingadzime pane yako iPhone | IPhone nhau
Chekuita nezve dambudziko risinganzwisisike remwenje risingadzime pane yako iPhone
Matambudziko madiki atinoona mune software anogona kutsamwisa, asi ini ndinofunga iwo haasi chinhu achienzaniswa neaya atinogona kuona mumuviri. Iri rave dambudziko rawaudza kwatiri iro iro iPhone 5s rakaona seyayo flash harina kudzima, uye hazvireve kuti hazviiti. Chii chingave chiri kuitika kune iyo iPhone kuitira kuti kupenya kwayo kusadzima uye chii chandingaite kuti ndiigadzirise?
Ini pachangu, ndaizopedzisira ndaudza munhu akabatwa kuti dambudziko nderemuviri, kureva, Hardware, uye kutsvaga nzira yekugadzirisa iyo iPhone nekukurumidza sezvazvinogona. Asi chokwadi ndechekuti havazi isu tese tine basa rakareruka rekutora iyo iPhone kuti igadziriswe kunzvimbo yepamutemo, saka, chekutanga, tinogona kuedza kuona kana tichigadzirisa kutadza kuburikidza nesoftware. Pano tinotsanangura zvatingaite (kunyangwe isu tisingazobudirire).
1 Chiedza che iPhone yangu hachidzime
1.1 Tora pikicha ine kupenya
1.2 Simbisa reboot
1.3 Dzosera uye gadziridza
1.4 Tora kuti ugadzirise
Chiedza che iPhone yangu hachidzime
Zvino toitei? Zvakanaka, dambudziko ringave riri repanyama, asi isu tinogona kugara tichiedza zvinhu zvishoma tisati tazvitora kuti zvigadziriswe.
Tora pikicha ine kupenya
Isu tatoziva kuti kupenya kuri kuvheneka, asi isu tichaedza kuikonzera iyo mhando yekumisazve. Kuti tiite izvi, chinhu chega chatinofanira kutanga tavhura iko Kamera application, ita shuwa kuti kupenya kwaitwa uye Tora mufananidzo. Ndinovimba izvi zvinodzosera zvese kune zvakajairwa mushure mekunge foto yatorwa.
Iwe pamwe watove wakaverenga iyi mhinduro kakawanda, zvakanyanya zvekuti inogona kuneta, asi Apple zvisiri pamutemo inoti kumanikidza kutanga gadzirisa kusvika ku80% yeavo madiki software matambudziko izvo zvatisingakwanise kugadzirisa neimwe nzira. Tichamanikidza reboot zvinotevera:
Tinodzvanya bhatani rekutanga (kumba) uye bhatani rekudzima panguva imwe chete. Kana isu tine iyo iPhone 7 kana iyo iPhone 7 Plus, bhatani repamba rinotsiviwa nehorodhi bhatani pasi.
Tinobata mabhatani ese kusvika taona apuro.
Patinoona apuro, tinosunungura mabhatani.
Tichaziva kana yakashanda ipapo. Kana zvisiri, tinogona kugara takamirira kuti iyo sisitimu yekushandisa itange kuona kana iyo bhaa ichidzima kamwe zvachose.
Dzosera uye gadziridza
Kana iwe wakasvika pano, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ini ndinofunga kumanikidza reboot kunofanirwa kudzima yedu yakashata mwenje kana dambudziko raive software, asi tisati tatanga kufambisa zvinhu kutora kana kutumira yedu iPhone kuApple, isu tinogona kuenda imwe imwe nhanho. Zviri nezve kudzorera iPhone ne iTunes uye ita yakachena kuisa (pasina kudzoreredza backup). Munguva yekuita, isu tichaonawo kana paine chero zvigadziriso zviripo. Kana zviripo, zvakanakisa kuti isu tisimise, kuitira kuti tigova nechokwadi chekuti tiri kushandisa yazvino vhezheni pasina kukweva chero zvingangoita kutadza kwesoftware.
Izvi ndizvo zvatakataura pakutanga kwenyaya, kuti kukundikana kwaigona kunge kuri kukanganisa kwemuviri uye kuti kugadziriswa kwe iPhone kwaidiwa. Mune ino kesi tichava nesarudzo nhatu dziripo, ina kana iwe uchikashinga.
Fonera Apple kuti vagone kugadzirisa iyo iPhone. Kana tichigara padyo kana munyika yatinogona kutumira yedu iPhone kumusangano wepamutemo weApple, zvakanakisa kuvasheedza kuti varonge musangano kuApple Store kana kuunganidzwa kwe iPhone yedu.
Fonera Apple kuti uende nayo kuchitoro chakabvumirwa. Izvi zvakafanana nepfungwa yapfuura, asi kune avo vasina nzvimbo yepamutemo padhuze. Iyo vimbiso inofanira kunge yakafanana neiya inopihwa naApple pachayo.
Tora iyo iPhone kunzvimbo isingatenderwe. Kufanana nemashopu emota, kune zvekare zvivakwa zvinofanirwa kukwanisa kugadzirisa chero chinhu chemagetsi, zvimwe zvacho zvine hunyanzvi mumafoni nhare. Mune urwu rudzi rwekugadzwa tinogona kuwana zvese, zvakanaka nezvakaipa. Kuchenjerera neizvi.
Zvigadzirise pachedu. Zvingangodaro, kana iwe uri kuverenga iyi positi imhaka yekuti haugone, asi iri sarudzo ye handymen.
Ndinovimba wakwanisa kudzima mwenje wekupenya kwako. Wakazviita sei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Chekuita nezve dambudziko risinganzwisisike remwenje risingadzime pane yako iPhone
Mhoroi, masikati machena, ndakatsanangura dambudziko ne iPhone yangu, yakanyorova uye pakarepo flash rakabuda uye handigone kuidzima, yangu iPhone iri 4s, kana mumwe munhu achigona kundibatsira, ndinozvikoshesa.
Inogona here iPhone 6s kuuraya vatakuri 66 paEgyptAir MS804 kutiza?